Tora-po feno fitiavana nohon’ny fetin’ny Noely – Gasy Egypte
“Ny fetin’ny Noely na Krismasy dia tsy ny 25 Desambra no anakalazaina eto Egypta fa ny 7 janoary satria manaraka ny an’ireo mpino ortodoksa (Orthodoxe) izay maro an’isa aty an-toerana. Ireo Kristianina Malagasy monina eto Egypta kosa anefa dia nankalaza izany fahatsiarovana ny nahaterahan’ny mpamonjy dia Jesoa Kristy omaly 25 Desambra 2019”.
Niara-paly sy nifety nankalaza ny Noely ireo Malagasy teto Egypta tamin’ny alalan’ny sasak’alina ny 24 Desambra 2019 tamin’ny fiangonana Katolika iray eto Caire ary nitohy tamin’ny fiaraha-misakafo izany. Rehefa fety toy izao dia mahatsiaro ny fianakaviana sy ireo havana any an-tanindrazana kanefa miezaka ny tsirairay mitondra hafaliana sy mizara izany miaraka amin’ireo mpiray tanindrazana aty an-tany lavitra.
Naneho fihetsika mendri-piderana ihany koa ny filohan’ny FMME izay mpino silamo saingy nanome haja izao fankalazana ny fety ho an’ny mpino kristianina izao. Toy izao ny hafatra nozarainy teo amin’ny pejiny tamin’ny tambazotran-tserasera :
Tora-po feno fitiavana sy fanajana no azoko amaritana izao hafatra izao. Ny fanajana ny hafa indrindra fa eo amin’ny resaka finoana dia fototra iray mitondra filaminana eo amin’ny fiaraha-monina. Ankoatry ny fihavanana sy n firaisan-kina amin’ny maha samy Malagasy dia tena zava-dehibe loatra ny fifanajana.
Mirary soa indrindra fa dia fety sambatra ao anatin’ny filaminana sy ny fifaliana ho antsika rehetra.
Accueil, Activites et Divers, Ireo vahiny Tonga, Les Chroniques de Mihaja, Les incontournables, News Diplomatiques, Place au Caire, Politique, Vaovao